Dadka Yemen oo dib loo heshiisiinayo - BBC Somali - Warar
Dadka Yemen oo dib loo heshiisiinayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 18 Maarso, 2013, 04:42 GMT 07:42 SGA
Yemen waxa uu ka mid yahay dalalka uu saameeyay kacdoonka Carabta
Wada hadalo dib u heshiisiin oo ay wado Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in maanta ay ka bilowdaan dalka Yemen oo ujeedadu ay tahay in lagu sameeyo dastuur cusub oo qabyo ah iyo in la diyaariyo doorashooyin guud oo ka dhaca dalka Yemen sanadka soo socda.
In ka badan 500 wakiilo matalaya kooxaha kala duwan ee siyaasadda ayaa la filayaa inay ka qeybgalaan wada hadalada, oo la filayo inay socdaan muddo lix bilood ah.
Si kastaba ha ahaatee kooxaha xag jirka ah ee u ololeeyaha madax banaanida Koonfurta Yemen ayaa qaadacaya wada hadalada.
Waxaana ay ka bilaabeen banaanbaxto magaalada dekedaa ah ee Cadan.
Dalka Yemen waa dalka keliya ee kacdoonadii carabta ka dhacay lagu heshiiyay meel dhexe.